Koobka Adduunka ayaa ka bilaaban doona dalka Russia maanta – STAR FM SOMALIA
Tababare Jose Mourinho ayaan dooneyn inuu iibiyo ciyaariyahankiisa reer France Anthony Martial, balse maankiisa badali kara hadii ay Red Devils hal shuruud kasoo baxdo sida ay warinayaan warbaahinta Ingiriiska.
Martial ayaa qaatay fasal ciyaareed aad u adag kadib markii uu waayay boos joogto ah, waxeyna xaaladda kusii xumaatay markii uu January kusoo biiray kooxda xiddiga mushaarka ugu badan kooxda ka qaata ee Alexis Sanchez.
Inuusan wax badan u ciyaaarin kooxdiisa waxey keentay inuu waayo ka qeybgalka koobka Aduunka maadaama Didier Dechamps uu watay ciyaartoy inta badan safka hore ka ah kooxahooda
“Kadib markii aan ka fakarnay dhamaan waxyaabaha suuragalka ah, Anthony wuxuu doonayaa inuu ka huleelo Old Trafford” ayuu yiri Philippe Lamboley oo la hadlayay RMC.
Kooxo badan oo qaaradda yurub ah ayaa doonaya xiddigaan waxaana ka mid ah Tottenham Hotspur iyo Juventus, kuwaas oo si fiican ugu qancay hanaan ciyaareedka xiddiga reer France.
Red Devils ma dooneyso iney xiddigeeda da’da yar fasaxdo, balse xaaladda ayaa kusii xumaaneysa maadaama kaliya 12-bilood uu kaga harsan yahay qandaraaskiisa.
Jose Mourinho wuxuu maamulka Red Devils ku wargaliyay inaan la iibin Martial, ama loo balan qaado in lacagaha lagu iibiyo farta laga saari doono si uu badalkiisa ugu soo iibsado.
Weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa diidi doona xiisaha uga imaanaya kooxaha Manchester United, Manchester City iyo Chelsea si uu u sugo kooxda Real Madrid, waxaa sidaasi qortay jariirada The Independent.
Waqti xaadirkaan Real Madrid waxaa ku soo socota xayiraad laga saraayo suuqa kala iibsiga, lamana soo wareegi karaan ciyaaryahan xagaaga soo socda iyo bisha Janaayo ee 2017 ka dib markii FIFA ay ku heshay danbi ah inay si sharcidarro ah kula soo wareegeen caruur da’dooda ka yar tahay 18 sanno jir oo ajnabi ah.
Lewandowski oo Bayern Munich ka soo biiray Borussia Dortmund sannadkii 2014 ayaa lagu waramayaa inuu doonayo tartan cusub ka dib markii uu labo xilli ciyaareed oo guulo ah la qaatay kooxda heysata horyaalka Bundesliga ee Bayern Munich.
Waxaana uu diyaar u yahay inuu iska diido kooxaha Premier League ee xiiseynaya isagoo dhawaan weeraray kubada cagta Ingariiska, waxaana uu daneynayaa inuu Galatico ka noqdo kooxda caasimada Spain ka dhisan ee Los Blancos.
Real Madrid ayaa racfaan ka qaadatay xayiraadii laga saaray suuqa kala iibsiga waxaana ay rajeynayaan inay ku guuleystaan taasoo u saamixi doonta inay la soo wareega xagaaga Robert Lewandowski.